बेलायतले नेपालबाट १० हजार कामदार लैजाने, तलब ३५ लाख ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/बेलायतले नेपालबाट १० हजार कामदार लैजाने, तलब ३५ लाख !
काठमाडौं । बेलायतले १० हजार नेपाली नर्सहरु लैजाने इच्छा देखाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले १० हजार नेपाली नर्सहरु लैजाने इच्छा बेलाएतले देखाएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले कोभिडपछि बेलायतमा झन्डै एक लाख नर्सको माग भएकामा फिलिपिन्स, भारत र नेपालबाट नर्सिङ क्षेत्रमा आबद्ध भएका कामदार लाने तयारी भएको बताए ।